I-Waterfront Lake Kissimmee House W/ ISIBHEBHANA sokunyuswa
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguTaylor
Igumbi lokulala eli-2 elihle nelinoxolo, igumbi lokuhlambela eliyi-2.5 elikwikona yaseMazantsi Ntshona yeLake Kissimmee (ngaphandle kwendlela ye-60). ILake Kissimmee yaziwa ngokuloba okukumgangatho wehlabathi kumanzi amatsha kunye nokuhamba ngenqanawa emoyeni. Indlu ikwaza ixhotyiswe ngesiliphu sephenyane esigqunyiweyo esine lift yesikhephe sakho. Kanye kufutshane neGrape Hammock Boat Ramp kunye neCamp kunye nemizuzu kude neWest Gate River Ranch. Igqibelele nokuba ujonge uhambo lokuloba, ulonwabo losapho luzaliswe impelaveki kwi-rodeo okanye nje indawo yokubaleka.
Ifumaneka kanye kwiLake Kissimmee, le ndlu inalo lonke iphupha labalobi kunye nabahambi ngeenqanawa. Ukunyuswa kwesikhephe kuyafumaneka ukufikelela lula emanzini. I-Grill kwaye uxhonywe kwi-patio bar yangasemva kunye nezitulo. I-Firepit kwidekhi nayo.
I-Shady Lane nje iiyadi kude ne-Grape Hammock isikhitshane sethampu kunye nenkampu. Ibekwe kanye kwi-SR 60 kunye nemizuzu kude neWest Gate River Ranch. I-River Ranch ine-rodeo yeveki kunye ne-block party kuyo yonke iminyaka ukuba ibe khona. Ikwanayo nesaluni ka 21 ukuya phezulu.
Andihlali kufutshane nepropathi kodwa ndingafumaneka ngefowuni.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lake Wales